3 koorso oo bilaash ah oo loogu talagalay Adobe InDesign | Abuurista khadka tooska ah
InDesign waa mid ka mid ah codsiyada ugu isticmaalka badan ee daabacaadda iyo soosaarida qaababka tifaftirka (laga soo bilaabo joornaalada illaa buugaagta, daboolida ...), in kastoo heerka suuqa ay jiraan qalab kale oo loogu talagalay isla ujeeddada (tusaale ahaan, Daabacaha Microsoft ama Scribus , taas oo ah codsi il furan ama bilaash ah), maanta waxaan diiradda saari doonnaa barnaamijka Adobe.
Ma jeceshahay inaad soo gasho adduunka qaabeynta?
1 Maxay tahay sababta Adobe InDesign?
2 Xulashada koorsada bilaashka ah
Maxay tahay sababta Adobe InDesign?
Anigu shaqsiyan waan taageersanahay dhamaan alaabada Adobe, malaha sababtoo ah boodkeygii ugu horeeyey ee aduunka naqshadeyntu wuxuu ahaa Adobe Photoshop taasna waxay igu kaliftey inaan u janjeero dhanka kale ee ay soo bandhigtay calaamadan. Tani waxay u badan tahay sababta oo ah isdhexgalka waa mid dareen leh, la maareyn karo waxayna noo oggolaaneysaa inaan ku helno heer aad u sarreeya oo ku habboon shaqadeena.
InDesign waxay u egtahay inuu leeyahay qaabka ugu fiican ee la xiriirta barnaamijyada kale (oo ay ku jiraan Quark Express, oo ah tartan weligeed ah). Tusaale ahaan, waxay na siineysaa xakameyn dheeraad ah bogagga jaban, kala dheereynta, iyo walxaha. Waxay bixisaa xulashooyin lagu abuurayo laguna qaabeynayo qaabab dhijitaal ah waxayna leedahay taageero maqal iyo muuqaal ah. Dhab ahaantii, waa caano.
Xulashada koorsada bilaashka ah
Weli, waxaan kugu martiqaadayaa inaad tijaabiso codsiyo kala duwan, Naqshadeynta waxay noqon kartaa farshaxan xiiso leh oo runtii wax badan noogu soo kordhin kara annagoo ah xirfadlayaal muuqaal ah. Haddii aad sameyneyso forays-kaaga ugu horreeya adduunkaan yar, waxaad u baahan tahay inaad hesho casharro aasaasi ah. Runtii waxaa jira koorsooyin wanaagsan oo kajira iskuulada qaabeynta, akadeemiyada iyo xarumaha kale ee waxbarista kuwaas oo na siin kara aasaas aad u wanaagsan. Laakiin waxaan ka warqabaa in inbadan oo idinka mid ah, waqti, dhaqaale ama sababo kale awgood, aysan iska bixin karin koorsada noocan ah. Tani sidoo kale maahan riwaayad, waxaa jira habab badan oo lagu barto laguna kasbado aqoonta mahadnaqa internetka. Maanta waxaan kuu keenayaa seddex koorso aasaasi ah oo hordhac u ah arjiga. Iyaga waxaad ku ogaan doontaan jawiga shaqada iyo howlaha lagama maarmaanka u ah inaad kubilaabtaan kobcinta arjiga iyo gabi ahaanba waa lacag la'aan
Koorsada fiidiyowga: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmJE_P_j3_Id9rTtov22bK92KyhTB9gW9
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » 3 koorsooyin bilaash ah oo loogu talagalay Adobe InDesign
Ku jawaab lmbica
Waad salaaman tahay, koorsooyinkaas midkood ma bixiyaa shahaado?
Ku jawaab seelvana
Aad baad ugu mahadsantahay sida aad u daryeeshay nuxurkaan oo aad ula wadaageyso qof walba, mahadsanid